Sein Lyan - စိ န် လျှံ: စိတ်ကူးနဲ့ရူး
Writer Sein Lyan Time 7:34 pm
အစစ အရာရာ အဆင်ပြေအောင်မြင်ပါစေ
12 January 2011 at 20:44
ပြည်တော်ပြန်မှာ အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေဗျာ။ ခံစားချက်တွေ ရင်ဖွင့်မယ်ဆိုတော့ မျော်လင့်လျှက်ပါ။ သူများ ပြန်တော့ လိုက်ပြန်ချင်တယ်ဗျာ။
စိတ်မညစ်ပါနဲ့ ဖိုးစိန်လေးရယ်. ဟိုက နံမည်ကြီးမျောက်လောင်းနဲ့ ပေါင်းပြီး စီးပွားရေး ကြီးပွားရေးတခုခု လုပ်ပါလား သေချာတယ် တနေ့တော့ ပြည်သူ့မေတ္တာစူးပြိး သေနိုင်တယ်. :P
အားမငယ်နဲ့ ကိုဖိုးစိန်က ၆ နှစ်ကြာမှအိမ်ပြန်တာ ကျမက ၂၂ နှစ်ကြာမှပြန်ရောက်သွားတာ ဘယ်လိုမှန်းကိုမသိတော့ဘူး အရာအားလုံးကပြောင်းလွဲ ကုန်ရောဘဲ...မပြောင်လွဲတာက သူငယ်ချင်းတွေ...။
13 January 2011 at 00:43
Restaurant ဖွင့်ပါလား, you can be your own boss !
13 January 2011 at 03:05
ကိုဖိုးစိန် မော်လမြိုင် ကဟုတ် ...
အထူးစပယ်ရှယ် အစားအစာ များသာ
ဆိုပြီး ဆီးသီးတောမှာ ရောင်းလေ ..
တစ်ခြားဘာမှ မရောင်းနဲ့ .. :D
မော်လမြိုင် ပဲပြား အစာသွပ်
စားချင်လာပြီ ..း))
13 January 2011 at 04:00
အိမ်ပြန်မယ့် ကိစ္ဆထဲမှာ ရည်းစားတောင် မရှိဘူး ဆိုတာကတော့ သက်သက်ေုက်ာငြာဝင်တာ.. :P
ကြိုးစားနေသရွေ့တော့ ဘယ်တော့မှ မကျရှုံးပါဘူး။ အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ဆိုတာ တနေ့ တလံ ပုဂံ မရွေ့... ဆိုသလိုပဲ ဖြည်းဖြည်းနဲ့ မှန်မှန် လျှောက်နေရင်း နီးသထက် နီးလာမှာပါ။
စားပွဲပေါ်တင်ထားတဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေကို ကုလားထိုင်မှာ အကျအနထိုင်ပြီး လက်မှတ်ထိုးတဲ့ ဘဝကတော့ မဖြစ်လာနိုင်ဘူးလို့ ဘယ်သူက ပြောနိုင်လို့လဲ။ ဖြစ်လာမှာပါ။
ပြည်တော်ပြန်ခရီး မေတ္တာ သင်းရနံ့တွေ ထုံပျံ့နေပါစေဗျာ...
14 March 2011 at 13:52